Moon Ukukhanya Kwetafula - Umagazini Design
Ukukhanya Kwetafula Lokhu kukhanya kudlala indima ebonakalayo yokuphelezela abantu emsebenzini wokusebenza kusukela ekuseni kuze kube sebusuku. It yakhelwe nabantu abasebenza imvelo engqondweni. Ucingo lungaxhunyaniswa kwikhompyutha ye-laptop noma ebhange lamandla. Ukuma kwenyanga kwenziwa ngamakota amathathu wesiyingi njengesithonjana esikhuphukayo esithombeni sendawo eyakhiwe ngohlaka olungenasici. Iphethini yenyanga ikhumbuza umhlahlandlela wokufika kweprojekthi yesikhala. Isilungiselelo sibukeka njengesibazi ekukhanyeni kwemini nemishini ekhanyayo edonsa isikhathi somsebenzi ebusuku.
Igama lephrojekthi : Moon, Igama labaklami : Naai-Jung Shih, Igama leklayenti : Naai-Jung Shih.
Amafomu angama-3d aphrintiwe kanye nemiklamo yemikhiqizo
Ukukhanya Kwetafula Naai-Jung Shih Moon